Nipariaka nanerana ny firenena iray manontolo ny fihetsiketsehana tao Belgrade manohitra ny Filoha Serba Aleksander Vučić · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Febroary 2019 5:21 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, Español, Italiano, srpski, русский, English
Mpanao fihetsiketsehana teny an-dalamben’i Belgrade, Serbia, ny 29 Desambra 2018. Mpanoratra tsy fantatra anarana, sary niparitaka tao amin’ny tambajotra sosialy.
Nanomboka ny fihetsiketsehana rehefa tafavoaka velona tamin’ny fikasana ny famonoana azy tamin’ny 23 Novambra (2018) i Borko Stéfanovic, izay filohan’ny antoko politika elatra Ankavia Serba, sady mpanorina ny fiaraha-mitantan’ny mpanohitra ho an’i Serbia, raha novelesin’ireo jiolahimboto niaraka tamin’ny bara vy izy, niaraka tamin’ireo mpikatroka roa hafa avy amin’ny elatra Ankavia Serba, tao an- tanàndehiben’i Krusevac tao Serbia Afovoany.
Nitombo ihany ny fihetsiketseham-panoherana taorian’ny fikasana famonoana hafa an’ilay mpanao gazety Milan Jovanovic ny 11 Desambra (2018).
Isaky ny Asabotsy nanomboka ny faran’ny volana Novambra (2018), olona an’arivony no niaritra ny hatsiaka mamirifiry mba hidina an-dalamben’i Belgrade niaraka tamin’ny teny filamatra hoe ‘’hajanony ny fanosoran-dra ny fitafiana ’’ (#STOPkrvavimkošuljama). Teraka taorian’ny valan-dresaka an- gazety ity teny filamatra ity, izay nanehoan’i Sefanovic ny akanjony tasin’ny rà nandritra ny famoriam-bahoaka taorian’ny fanafihana tamin’ny 23 Novambra(2018). Tamin’ny 5 Janoary (2019) dia nisy fihetsiketsehana lehibe natao voalohany tao Novi Sad, Niš sy Kragujevac, izay tanandehibe telo lehibe ao Serbia, ary tany Kursumilija sy Pozega, izay kely kokoa ihany koa.
Teny filamatry ny fihetsiketsehana iray hafa ‘’iray amin’ny dimy tapitrisa’’ (#1od5miliona) dia natao hilazana ny fanambarana nataon’i M. Vučić vao haingana fa tsy hamaly ny fangatahana rehetra izy na dia olona dimy tapitrisa aza no hiverina eny an-dalambe indray. Miisa eo amin’ny enina tapitrisa eo ho eo ny mponina ao Serbia.
Tsaroan’ny maro ny fitovian’ireo zava-nitranga tamin’ny nahatonga ny fialan’i Slobodan Milošević teo amin’ny fahefana (izay i Vucic, elatra havanana hiringiriny no Minisitry ny Serasera) tamin’ny taona 2000, anisan’ny nahatsiaro izany i Biljana Stepanovic, mpanao gazety izay nisioka sary roa mifanila :
Ny teny filamatra hafa sady hita tao amin’ny gazety sy ny tambajotra sosialy dia ny hoe ‘’ny fiandohana’’ (#počeloJe), kiaky ny fanantenana fa mitombo ny hetsi-panoherana amin’ny hetsi-bahoaka manerana ny firenena rehetra nitovy tamin’ny faran’ny taompolo 1990.
Tsy dia niraharaha firy ireo fihetsiketsehana ireo izy, hatramin'izao. Raha niezaka ny hampihena ny habehany sy ny maha-zava-dehibe izany ny fampahalalam-baovaom-panjakana, i Vučić kosa tetsy andanin’izany dia nandrangitra ireo mpanohitra azy tamin’ny filazana ny fifidianana tsy ampoizina izay eo ambany fifehezan'ny antoko eo amin’ny Fanjakana tanteraka ka tsy afa-manao afa-tsy ny nanome azy fandresena. Nilaza ireo mpitarika ny mpanohitra fa hanao ankivy izany fanapahan-kevitra izany izy ireo.
Tao anatin’ny antsafa niarahana tamin’i Balkan Insight, nilaza ny mpikarakara ny fihetsiketsehana fa ny ‘’hampifoha ny tanora Serba hiala amin’ny tsy firaharahiany’’ no tombotsoany lehibe kanefa tsy nanao fanentanana mivantana ny hakan’ny mpanohitra ny toeran’ny governemanta ankehitriny. Somary mangingina tamin’ny fihetsiketsehana ny mpanohitra noho ny tahotra hivadihan’ireo olom-pirenena tsy miresaka politika na ireo mpikatroka mafana fo amin’ny fiarahamonim-pirenena.
Nandritra izany fotoana izany, navadiky ny vahoaka ho fanesoana ny fanodikodinam-baovao nataon’ireo fampahalalam-baovaom-panjakana. Niaraka tamin’ny fahazoana miditra amin’ny Aterineto dia afaka nahita izay zava-nitranga marina ny olona, noho ireo lahantsary sy ireo sary nalaina mivantana teo an-toerana.
Farany, nanoratra ireo mpanao hetsi-panoherana tao anaty taratasy misokatra ho an’i M. Vučić, fa tsy matahotra ny fanamavoany azy ireo ry zareo.